20 Goobood oo TV-ga Tooska ah oo Bilaash ah 2022 - Wareega Hantida
Bogga ugu weyn 20 Goobood oo TV-ga Tooska ah oo Bilaash ah 2022
Nidaamkeena maaweelada ee maalinlaha ah ayaa si xawli ah u bedelay natiijada baahinta onlineka ah.
Waa ina dhaafay maalmihii aynu maskaxda ku haynay si aan u doorano xidhmada TV-ga fiilo ee ugu kharash badan, maadaama aad hadda ka heli karto qadar aan xadidnayn oo madadaalada dhijitaalka ah aduunka oo dhan adoon kharash garaynin hal dollar.
Mid ka mid ah dhinacyada ugu yaabka badan ee mowjadaha internetka ayaa ah helitaanka goobo kuu oggolaanaya inaad si toos ah ugu daawato bandhigyada TV-ga iyo filimada bilaashka ah.
Waxa jira dhawr adeegyo oo daawasho ah oo laga heli karo online halkaas oo aad ka heli karto dhammaan taxanaha shabakada ee aad ugu jeceshahay uguna xiisaha badan iyo qaybaha bilaashka ah.
Halkan waxaa ah dhowr goobood oo TV-ga si toos ah uga socda oo laga yaabo inay kaa caawiyaan inaad noolaato maalin caajis ah.
20 Goobo TV Live ah oo bilaash ah
Hulu waa madal kobcaysa oo loogu talagalay taxanaha TV-ga iyo filimada; Waxaad ku heli kartaa adigoo iska diiwaan gelinaya adeeggiisa ku saleysan is-diiwaangelinta ama daawashada xaddi xaddidan oo agab bilaash ah.
Asal ahaan, Hulu waxay ku dartay daawashada tooska ah ee TV-ga wax-qabadkeeda; adeeggu wuxuu ahaa mid la heli karo ilaa 2017.
Markii hore, ikhtiyaarka kaliya ayaa ahaa in la qabsado dhacdooyin hore - iyo sidoo kale kuwa casriga ah ee hadda jira sida saaxiibada.
Hulu TV waa hab fiican oo lagugu mashquulo maktabadooda agabka badan, waxaadna hubin kartaa inaad hesho khibrada ugu fiican ee suurtogalka ah adiga oo si taxadar leh u dooranaya xidhmadaada.
Doorashada ugu hooseysa waxay yeelan doontaa xayeysiis, halka doorashada ugu qaalisan ay ku jiri doonto telefishin toos ah oo aan kala go' lahayn, laakiin labada ikhtiyaar waxaa ku jiri doona taxane cajiib ah iyo filimaan la daawaday sanado badan.
In ka badan 150 Filim iyo Bandhigyo Talefishin ah
Apps ee Qalabka Gaarka ah
Socodka Qeexida Sare
BOOQASHO - https://www.hulu.com/
Mareegta caalamiga ah ee daawaynta ayaa laga yaabaa inay kaa caawiso inaad fududayso waayo aragnimadaada muuqaalka telefishanka tooska ah adigoo keenaya maktabad hodan ku ah oo si habsami leh u habaysan luuqad, gobol, iyo qayb. Tilmaame- fudud oo la isticmaali karo ayaa kaa caawin kara inaad gasho kanaalada ka socda waddamo kala duwan, adigoo u malaynaya inay ka heli karaan gobolkaaga.
Tixgeli Squid TV inuu noqdo isku-duwaha isku xidhka oo bixiya kanaalada tooska ah ee bilaashka ah. Kanaalada waa la kala firdhiyaa loona kala firdhiyaa si waafaqsan gobolka, taas oo ka dhigaysa socodka u muuqda ciyaar caruureed.
Qalab tayo sare leh oo shaki la'aan ku qancin doona baahiyahaaga madadaalada.
Kala soocida gobolku waxay fududaynaysaa habka xulashada iyo gudbinta alaabta.
BOOQASHO - https://www.squidtv.net/
3. Sanduuqa Bandhiga:
Showbox waxa uu fududeeyay marin u helida malaayiin qofood oo ah daawashada fiidyaha ee ay jecel yihiin iyo barnaamijyada telefishinka. Waa mid gaar ah in ay tahay madal gebi ahaanba bilaash ah oo kuu oggolaanaysa inaad ku shubto filimada aad jeceshahay iyo qaybaha TV-ga ee socodka.
Macluumaadka la bixiyay waa mid aad u tayo badan, lagaama rabo inaad bixiso dinaar si aad u hesho.
Showbox waxa uu jiray wakhti dheer wali waxa uu sii ahaanayaa mid ka mid ah filimada ugu caansan uguna wanagsan iyo barnaamijyada daawashada telefishinka.
BOOQASHO - https://www.showboxmovies.net/
AT&T DirecTV waxay si degdeg ah u dhisaysaa saldhig macaamiil oo baaxad leh. Adeegyadan telefishinka ee khadka tooska ah, oo bixiya in ka badan 150 kanaal, ayaa baahiya talefishin toos ah. Filo tiro sii kordhaysa ee kanaalada TV-ga iyo maktabad weyn oo warbaahineed marka TunerMedia ay gadaal ka socoto.
Talefishinka onlaynka ah waxaa weheliya adeeggan filimada iyo bandhigyada telefishinka. Intaa waxaa dheer, waxaa jira App ah oo leh dhibaatooyin iyo cillado kala duwan, taas oo ka dhigaysa mid aad u macquul ah marka loo eego khibradda Isticmaalaha. Si kastaba ha noqotee, DirecTV waxay bixisaa isku-dar xoog leh oo madadaalo, muusig, isboorti, iyo kanaalada wararka, iyo sidoo kale dilaan kanaalo guud oo dheeri ah oo xirxiran feer wanaagsan qeybta baahinta fiidiyowga ee internetka.
BOOQASHO - https://www.directv.com/
Mid ka mid ah aaladaha tooska ah ee ugu weyn, SnagFilms waxay maktabadeeda ku leedahay in ka badan 2000 oo cinwaan, oo ay ku jiraan kuwa ugu cadcad iyo sidoo kale filimada casriga ah ee indie. Shabakaddan waxa ku jira noocyo kala duwan oo ay ku jiraan dhammaan bandhigyada telefishannada ee tooska ah iyo kuwa hore loo duubay.
Si aad u gasho buug-yarahaan, waa inaad iska diiwaan gelisaa ciwaan email sax ah. Waxa kale oo ay leedahay xayeysiisyo; si kastaba ha ahaatee, waxay ku xidhan yihiin xog kooban oo qarsoon. Way fududahay in lagu xidho adeegan TV-ga SnagFilims ee ka yimid Maraykanka, Boqortooyada Ingiriiska, Jarmalka, ama Switzerland, laakiin waa lagu xannibi doonaa oo waxaad heli doontaa ogeysiis khalad ah haddii aad isku daydo inaad ka gasho meel kale.
BOOQASHO - https://www.snagfilms.com/
Waxay la jaanqaadi kartaa qalabyo kala duwan, oo ay ku jiraan telefishinada, taleefannada casriga ah, tablet-yada, iyo kombayutarada.
Helitaanka dhammaan agabka halyeeyada ee shabakadaha Ingiriisida iyo Hindi, Hyfy TV waxay sidoo kale kuu oggolaaneysaa inaad si toos ah u daawato dhammaan kanaalada gobolka iyo kan maxalliga ah.
Ma jiraan wax xayeysiis ah.
Hyfy TV waa bilaa xayeysiis, takhasuskiisuna waa hagitaan xarrago leh oo leh khibrad isticmaale oo dareen leh.
Hyfy TV, waxaad si dadaal la'aan ah u daawan kartaa filimada khadka tooska ah, sahamin kartaa dhacdooyinka isboortiga ee aad ugu jeceshahay, oo waxaad geli kartaa wararka tooska ah.
Taageerada Luuqadaha iyo Kanaalka Badan
Ahaanshaha mid ka mid ah shabakadaha TV-yada ee ugu caansan meeraha, waxay ku shaqeeyaan luqado kala duwan, keydka macluumaadka waxaa ku jira kanaalo ka socda quruumo iyo luqado kala duwan, oo ay ku jiraan Talyaani, Isbaanish, Faransiis, iyo Carabi.
Waxaad si fudud u heli kartaa luqadaada hooyo iyo kanaalada hoos yimaada qaybaha oo aad u sahamiso si aad qalbigaaga ugu farxiso.
Kala soocida sida ku cad noocyada
Dhammaan barnaamijyada, sida muusiga, filimada, ciyaaraha, carruurta, majaajilada, safarka iyo dalxiiska, iyo wixii la mid ah, ayaa si habsami leh loo habeeyey qayb ahaan, taas oo sahlaysa in la baadho oo la daawado.
Haddii aad la kulanto fiidiyowga, oo aan ahayn arrinta qulqulka, si naxariis leh u rakib fidinta Chrome iyo dhibaatadu waxay u badan tahay inay is xalliso.
BOOQASHO - https://hyfytvapk.com/
Qalabkani wuxuu ku habboon yahay dhammaan qalabka la taageeray sababtoo ah si sahlan oo loo habeyn karo, tirada badan ee kanaalada la heli karo, iyo qiimaha hooseeya. Waxa jira 31 kanaal oo lagu daray qorshaha Sling's Orange oo ah $15 bishii.
Waxay bixisaa xulasho adag oo ah ciyaaraha muhiimka ah, wararka, iyo kanaalada madadaalada. Doorashada Buluugga ah ee $15 bishii waxay la socotaa 45 kanaal. Orange iyo Buluug waxa lagu xidhi karaa hal rukhsad bishiiba $25.
BOOQASHO - https://www.sling.com/
UStream, waxaa jira dhowr kanaal oo aad u wanaagsan oo laga soo xusho. Waxaad ku shubi kartaa barnaamijyo muuqaal ah, munaasabadaha isboortiga, iyo filimada leh qulqulka tayada sare leh oo bilaash ah. Si kastaba ha ahaatee, haddii xayeysiisku ka soo muuqdo shaashaddaada markaad daawanayso ama aad ku socoto, waxay xannibi doontaa dhammaan qulqulka tooska ah.
Si kastaba ha ahaatee, xannibaadaha xayeysiiska ayaa diyaar ah, markaa tani dhib ma ahaan doonto. Haddi ay duruustu istaagto meelkasta, u tag qoraal hoosaadyo adiga oo hoos ugu dhaadhacaya aagga la geliyo, halkaas oo dhammaan filimaanta aan la shubin ay bilaabmaan mar haddii xaddidaadda cabbirka 200MB ee xajmigu si degdeg ah ugu dhufato.
BOOQASHO - https://ustream.to/index.html
Hotstar ka 21st Century Fox (hadda Disney) waa doorashada ugu weyn haddii aad ku raaxaysato filimada Hindida. Adeeggu waxa uu leeyahay maktabad weyn oo Riwaayadaha Hindida waaweyn, Telenovelas, Aflaanta, iyo Bandhigyada TV-ga, taas oo ka dhigaysa meesha ugu muhiimsan ee madadaalada Hindida ee heerka sare ah. Sababtoo ah Hotstar wuxuu leeyahay tiro badan oo filimo caalami ah, waxaa laga bilaabay Maraykanka iyo Kanada iyada oo loo marayo fidinta maktabadaha nuxurka si looga fogaado xadgudub kasta oo xuquuqda dhijitaalka ah.
Anaga, adeega hadda waa laga heli karaa Android oo ugu dambayntii waxa laga heli karaa iOS iyo Apple TV, in kasta oo aad ka geli karto shabakadda us.hotstar.com. Haddii aad degan tahay Hindiya, waa inaad isticmaashaa Hotstar. Waxaa laga yaabaa inaad daawato dhammaan kanaalada tooska ah ee Star India, oo ay ku jiraan Hindi, Telugu, filimaan, warar, iyo kanaalada macluumaadka sida Nat Geo iyo qaar kaloo badan.
BOOQASHO - http://www.hotstar.com/
Waxaad ku daawan kartaa in ka badan boqol kanaal oo toos ah iyo kumanaan filimaan ah oo la dalbanayo lacag la'aan. Waxay iskaashi la samaysaa istuudiyowyada filimada, shabakadaha telefishinka ee waaweyn, shirkadaha warbaahinta dhijitaalka ah, iyo daabacayaasha si ay lacag uga soo saaraan xayaysiisyada fiidyaha ee dhexmara qaybaha bandhigyada.
Waxay habaysaa agabka guud waxayna u habaysaa qaybo ay ka mid yihiin kaftan, ciyaaraha, qaboojinta, ciyaarta, muusiga, wakhtiga firaaqada, raadiyaha, iyo wixii la mid ah. Waxa ay isticmaashaa barnaamij gaar ah oo ku habboon Android, iOS, Roku, Apple TV, iyo aaladaha kale. Dabeecada fudud ee arjiga waxaa lagu sii xoojiyey UI hufan oo ka soo jiidaya saamaynta xadhigga TV-ga ee la tijaabiyey oo run ah.
Isticmaalayaasha Mac iyo Windows waxa laga yaabaa inay ku kaydiyaan barnaamijyada ku jira darawaladooda adag si ay hadhow u daawadaan.
Tayada fiidiyaha oo aad u fiican iyo is-dhexgal isticmaale oo si fudud loo isticmaali karo.
BOOQASHO - https://www.yupptv.com/
Mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee laga daawado talefishinka tooska ah ee aduunka oo dhan waa Streema. Natiijo ahaan, waxay ku faantaa ururinta ugu weyn adduunka ee TV-yada tooska ah ee loo kala soocay waddan, magaalo, iyo luqad, iyo nooc.
Waxay leedahay muuqaal ka duwan goobaha kale ee liiskayaga; Saldhig kasta oo aad doorato, waxaa kuu soo baxaysa pop-up cusub oo waxaad ka daawan doontaa TV-ga halkaas. Mareegtan lacag kuguma dalacayso daawashada telefiishanka tooska ah.
Raadiyaha iyo TV-ga bilaashka ah loogu daawado
Haddii aad raadineyso inaad la qabsato bandhigyada aad jeceshahay markaad dhageysaneyso idaacadaha aad jeceshahay, markaa Streema waa ikhtiyaar weyn.
Apps ee iOS iyo Android
Streema waxay leedahay codsigeeda, kaas oo laga heli karo Google Play iyo iTunes waxayna heshay dhowr faallood oo cajiib ah macaamiisha.
BOOQASHO - https://streema.com/
OK Live TV waa shabakad telefishin toos ah oo si toos ah uga talisa xiriiriya xarumo kala duwan. Looma baahna xubinnimo; si fudud guji barnaamijka aad rabto oo waxa uu bilaabayaa ciyaarta isla markiiba. Fiidiyowgu waa toosan yahay, iyada oo aan wax wakhti ahi u dhaxayn buffering's.
OK Live TV xitaa waxa uu bixiyaa kanaalada VIP-da ee bilaashka ah oo la daawado iyada oo aan la samayn koonto ama wax la iibsanayo. Markaa, haddii aad raadinayso macluumaad tayo sare leh oo leh waqtiyo xajin ah, isla markiiba ku biir.
Waa app aad u fiican dadka sida joogtada ah u raadinaya wax ay ku mashquuliyaan. Kaliya hal mouse guji oo waxaad heli doontaa malaayiin saacadood oo madadaalo ah saacad kasta, iyadoon loo eegayn meesha aad joogto ama waxaad samaynayso. Iyada oo in ka badan 75 kanaal ay ku jiraan nooc kasta oo la fahmi karo, laga bilaabo dukumentiyada ilaa ciyaaraha, waxaa jira wax qof walba u leeyahay rabitaankiisa qulqulka.
BOOQASHO - http://oklivetv.com/
Haddii aad jeceshahay nashqadaha quruxda badan iyo qaab-dhismeedka mareegaha heersare ah, Lihattv waa mid ka mid ah dhawrka adeeg ee TV-ga ee leh is-dhexgalka iyo khibradda ugu wanaagsan. Waxay leeyihiin interface fantastik ah oo adeegyada kale ee TV-gu ay tahay inay ogaadaan.
Shaqada raadinta kanaalka ayaa ah mid aad u degdeg badan.
Waxay qiimeeyaan hufnaanta iyo caddaynta; waxaad ka samayn kartaa wax kasta oo ka mid ah goobta, oo waxaad ka heli kartaa channels badan oo ka mid ah bogga isku mid ah.
Diirada koowaad waxay u muuqataa inay tahay bixinta waayo-aragnimo daawasho oo raaxo leh; la mid ah YouTube, waxaad hagaajin kartaa xallinta iyo tayada kanaalada ilaa 1080p HD heerarka.
BOOQASHO - https://lihattv.com/
USTVGO waa doorasho aad u fiican haddii aad rabto inaad daawato kaliya barnaamijyada telefishinka Maraykanka si toos ah. Si ka duwan goobo kale oo badan oo leh UI qalafsan iyo xayeysiisyo xad dhaaf ah, USTVGO waa degel aad u cad oo aan lahayn ama wax yar oo xayeysiis ah. Websaydhku wuxuu leeyahay in ka badan 80 kanaal telefishan oo toos ah, oo ay ku jiraan Shabakadda Kartoon, ESPN, Fox Sports, Discovery, National Geographic, History, ABC, Showtime, Science, NBC, TCM, CBS, CMT, Cinemax, CNN, Disney, WWE Network, Fox , HBO, iyo truTV.
Habka ugu wanagsan ee abka waa ciyaar yahan fiidiyoow ah oo aad u fudud oo si degdeg ah u shuba oo bixisa qulqul-free-free oo leh xidhiidh aad u wanaagsan. USTVGO waa door caan ah oo loogu talagalay kuwa raba inay TV-ga tooska ah naga daawataan annaga oo bilaash ah.
In ka badan 80 kanaal oo toos ah
Ma jiraan jihooyin ama soo-bandhigyo.
BOOQO - https://ustvgo.tv/
Cinema APK waxa laga yaabaa inay noqoto saaxiibkaada ugu fiican raadinta qulqulka khadka tooska ah ee bilaa dhibka ah iyo soo dejinta filimada qeexitaanka sare iyo bandhigyada telefishinka. Waxay bixisaa navigation si wanaagsan loo habeeyay, iyada oo hubinaysa khibrad isticmaale oo heersare ah.
La jaanqaadkeeda qalab kasta oo la qiyaasi karo, oo ay ku jiraan Amazon Firestick, Smart TV, Kodi, Android, Roku, iyo Nvidia Shield, waxay ku kordhisaa soo jiidashada. Sidaa darteed waa doorasho caan ah oo ka mid ah jiilka hadda jira, kaas oo leh harraad aan la daboolin oo loogu talagalay walxaha dhijitaalka ah.
Waxa laga yaabaa inaad isticmaasho Cinema APK adoon u baahnayn inaad marto diiwaangelinta isticmaalaha wakhti-qaadka ah taas oo sida caadiga ah kugu qasbi lahayd inaad soo gudbiso macluumaad sir ah. Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa rakibida app-ka si aad uhesho agab badan.
Sifooyin xusid mudan
Si joogto ah, macluumaad cusub ayaa lagu daraa.
Wuxuu bixiyaa macluumaadka ku saabsan filimaanta, qiimaynta, iyo taariikhda la sii daayo filimada iyo taxanaha TV-ga.
BOOQASHO - https://cinemaapk.net/
PlutoTV waa madal talefishin ah oo bixisa in ka badan 100 idaacadood, iyo sidoo kale filimaan iyo dhacdooyin, kuwaas oo dhamaantood lagu heli karo lacag la’aan iyo xayeysiis aan dhib lahayn. Waxay lacag ka helaan xayaysiisyada muuqaalka ah ee dhexmara bandhigyada, waxayna sidoo kale leeyihiin filimaan la rabo oo aad isla markiiba daawan karto markaad doorato.
Kani waa app-kii ugu horreeyay oo noociisa ah si uu u bixiyo talooyin la habeeyey oo wata filimaan caan ah iyo bandhigyo telefishan, iyo sidoo kale xulashada caalamiga ah ee nuxurka baahida. Waxyaabaha ay dooratay Pluto, oo ay ku jiraan siideyn cusub, duugyo, iyo gooyn la taaban karo oo lagu sameeyay noocyada aad jeceshahay, ayaa sidoo kale lagu heli karaa codsi bilaash ah iyada oo aan lahayn xubinimo ama saxiix lama huraan ah.
Ma jiri doono xad juqraafi ah, oo waxaad awoodi doontaa inaad ka gasho abka ama website-ka meel kasta wakhti kasta. Haddii filimaantu aysan ahayn shayga, waxay sidoo kale leeyihiin qaar ka mid ah kanaalada TV-ga ee wanaagsan oo laga heli karo app-kooda gaarka ah, kaas oo sidoo kale la socon kara Android.
BOOQASHO - http://www.pluto.com/
Sababtoo ah xog-ururintiisa oo badiyaa la cusboonaysiiyay qalab tayo sare leh, waa beddelka caanka ah ee shakhsiyaadka ku raaxaysta qulqulka kanaalada intarneedka. Si aad u bilowdo daawashada barnaamijyada aad ugu jeceshahay Tubi TV, waa in aad marka hore is diiwaan gelisaa. Tilmaamaha lambarka koowaad ee goobtani waa in, iyada oo leh saldhig taageere oo weyn iyo malaayiin booqdayaal joogto ah, waa gebi ahaanba bilaash.
Waxay kasbatay boos muhiim ah liiskan goobaha ugu fiican ee TV-ga tooska ah ee tooska ah iyadoo ay ugu wacan tahay sifooyinkeeda soo jiidashada leh sida kaydka xogta weyn iyo fududaynta helitaanka dhammaan walxaha qeexida sare ee ugu dambeeyay.
Waxay la shaqeysaa dhammaan aaladaha waaweyn, oo ay ku jiraan iOS, Android, Apple TV, Smart TV, iyo Xbox. Arrintaani waxay sare u qaadaysaa dhagarta.
Dhawr xisaabood ayaa laga yaabaa in isku mar la wada toosiyo, waxa ayna sidoo kale soo bandhigaysaa taariikhda daawashadaada. Waxay bixisaa kumanyaal si toos ah oo bilaash ah.
Jaceylka, Sci-Fi, Dembi, Kid's TV, iyo taxane kale oo TV caan ah ayaa ka mid ah kala soocida.
Faa'iidooyinka goobtan qulqulka bilaashka ah ee cajiibka ah waxaa ka mid ah navigation fudud iyo UI isticmaale-saaxiibtinimo ah.
BOOQASHO - https://tubitv.com/
Adeeggan baahinta caanka ah waxa laga yaabaa inuu daboolo baahiyaha madadaalada ee daawadayaasha oo bilaash ah. In kasta oo diiwaangelinta loo baahan yahay, nidaamka oo dhan waa mid fudud oo xitaa kuwa cusub ayaa laga yaabaa inay ka qaybqaataan. Isticmaalayaasha ayaa laga yaabaa inay ku raaxaystaan ​​labadaba wax soo saarka Crackle iyo baahinta tooska ah ee xarumaha telefishinada kale ka dib markay buuxiyaan nidaamka diiwaangelinta.
Soo saarista sawirada Sony ahaan, waxay si dhab ah u bixisaa dhammaan filimada iyo taxanaha lagu sii daayay boodhadhka Columbia iyo Sony ee aan meelo kale laga heli karin goobahooda qulqulka ah. Adeeggan baahinta tooska ah ee TV-ga ayaa laga heli karaa oo keliya gudaha Maraykanka wuxuuna leeyahay xayaysiis badan. Si kastaba ha ahaatee, ururinta macluumaadka ballaaran ee Crackle ayaa ka kooban dhammaan.
Leh adeegsi-saaxiibtinimo heer sare ah oo UI ka dhigaya socodka neecawda.
Marka isticmaaluhu isdiiwaan galiyo, waxa ay heli doonaan ogaysiisyada ku saabsan soo galitaanka iyo bilaabista cusub
BOOQASHO - https://www.sonycrackle.com/
Shabakadda ama addoo isticmaalaya abka mobaylka, waxaad ku daawan kartaa in ka badan 80 TV oo toos ah oo bilaash ah. Waxa kale oo aad heli kartaa in ka badan 60 kanaal oo bilaash ah oo aad ku daawan karto adiga oo aan waxba bixin. Daabacaada lacagta qaaliga ah ee Codsiga ($9/bishii) waxa ku jira kanaalo caan ah, oo laga yaabo in lagu galo lacag.
Adeeggu hadda waxa uu taageerayaa suuqa UK oo kaliya, laakiin kooxdu waxa ay doonaysaa in ay ku balaadhiso shabakadda Maraykanka, Kanada, iyo dalalka kale ee Yurub. Waxaad daawan kartaa TV-ga tooska ah, iyo sidoo kale la-qabsiga iyo hawlaha duubista, taasoo ka dhigaysa adeeg TV-ga si wanaagsan loo nashqadeeyay.
Kuwa soo socdaa waa Tilmaamaha App-ka Ciyaartoyga TV-ga:
Eeg dhammaan kanaalada ugu sarreeya UK.
Telefishinka Tooska ah iyo Dalabka
Ku dheji bandhigyada aad jeceshahay si aad u daawato mar kasta oo aad rabto.
Waxaad isticmaali kartaa Ciyaartoyga TV-gaaga + ilaa shan qalab isku mar.
BOOQASHO - https://tvplayer.com/
Airtel TV waxa uu u dabooli karaa baahiyaha dhammaan madadaalada jecel si cajiib ah, iyada oo in ka badan 350 TV oo toos ah ay ku hoos jiraan saqafkeeda. Isticmaalka boggan, waxaad si fudud u sahamin kartaa warar kala duwan, ciyaaraha, saabuunta maalinlaha ah, filimada, iyo qaar kaloo badan.
Ururinta la doortay ee ka badan toban kun oo blockbusters waxay ku siin kartaa madadaalo usbuucyadaas caajiska ah marka aad kaliya rabto inaad dib u fadhiiso oo aad ku nasato tubbada salool ee shukulaatada. TV-ga Airtel waxa uu si gaar ah ugu adeegaa macaamiisha Hindida ah, isaga oo leh 15 xarumood oo kala duwan, kuwaas oo qaarkood ay bixiyaan luuqadaha gobolka. Waxa kale oo aad ku heli kartaa Amazon Prime sanad bilaash ah adiga oo ku rakibaya Airtel TV laptop-kaaga, casrigaaga ama TV-ga smart.
Hal-gal ayaa ku xidhi kara ilaa shan qalab.
Waxa kale oo ay leedahay Airtel Exclusive, taas oo kor u qaadi karta khibradaada wax raadinta.
BOOQASHO - https://www.airtel.in/airteltv/
Suurtagal ma tahay in laga daawado goobaha baahinta TV-ga tooska ah ee Android/Firestick?
Haa, dhowr goobood oo TV toos ah oo bilaash ah ayaa laga heli karaa Firestick/Android. Xaqiiqda, dhab ahaantii, goob kasta oo liiska sare ku taal waxay si fiican ugu shaqeysaa kombuyuutarrada, Android, iyo Amazon's Fire TV.
Waa maxay goobaha ugu fiican ee baahinta tooska ah ee TV-ga?
Pluto TV, USTVGO, YuppTV, Hulu, iyo qaar kaloo badan oo liiskayaga ku jira ayaa ka mid ah meelaha ugu sarreeya ee si toos ah loogu daawado baahinta tooska ah ee la heli karo 2021.
3. Goobaha baahinta TV-ga tooska ah ee bilaashka ah si buuxda miyay xor u yihiin?
Inkasta oo goobaha qaarkood ay bixiyaan adeegyo is-diiwaangelin, waxay sidoo kale bixiyaan xaddi badan oo alaab bilaash ah. Markaad taas sheegtay, waxaad aadi kartaa goobta oo aad si toos ah u bilaabi kartaa TV-yo badan. Dhammaan mareegaha la tilmaamay waxay aad ugu fiican yihiin daawashada TV-ga tooska ah ee tooska ah, ama si kale haddii loo dhigo, goobaha TV-ga tooska ah ee ugu wanaagsan ee bilaashka ah.
Ma u baahan tahay VPN si aad u gasho boggaga baahinta TV-ga tooska ah?
Haa Markaad ka faa'iidaysanayso qaar ka mid ah adeegyadan baahinta TV-ga ah, waxaa lagu soo jeedinayaa inaad isticmaasho VPN si aad u qariso hawshaada baahinta oo aad naftaada uga ilaaliso milkiilayaasha boggaga internetka, tuugada, iyo ISP-gaaga.
Maxaa dhacaya haddii lagu qabto isticmaalka shabakadaha TV-ga tooska ah?
Waxaa laga yaabaa inaad la kulanto cawaaqib sharci haddii lagugu helo adigoo isticmaalaya adeegyada baahinta TV-ga tooska ah si aad u daawato waxyaabaha aan shatiga loo haysan.
Waa inaad isticmaashid taxaddar aad u daran markaad dooranayso goobaha TV-ga tooska ah ee bilaashka ah.
Kuwa sida sharci darrada ah u bixiya macluumaadka waxay had iyo jeer ku lug yeeshaan dhibaatooyinka duullaanka sirta ah, laakiin si buuxda ayaad ammaan u ahaan doontaa haddii aad ka doorato liiskayaga si xirfadaysan ee kor ku xusan.
Sida loola Xiriiro Maalgashadayaasha Malaga ee Hindiya | 2022 Tusaha Tallaabo-Talaabo-fudud ah
Maalgashadayaasha malaa'igahu waxay caadi ahaan maalgeliyaan ganacsiyada hal mar ama si joogto ah. Hadafkooda ugu muhiimsan waa inay caawiyaan…
Dhawr sano ka hor, wax kala iibsiga xisaabaadka ayaa gacanta lagu duubay, habkani wuxuu soo bandhigay faa'iido darrooyin badan sida…
10 Meelood ee Ugu Fiican ee Lagu Iibiyo Kaararka Pokemon Lacag Lacageed | 2021
Iibinta alaab -uruurintu had iyo jeer waxay ahayd hab qabow oo lagu kasbado lacag caddaan ah, gaar ahaan ururinta duugga ah iyo kuwa naadirka ah iyo…